के सन्दिप हिरो हुन् ? के दिए उनले नेपाललाई ? – Aawaj Media
Home /समाज/के सन्दिप हिरो हुन् ? के दिए उनले नेपाललाई ?
हाम्रो कथा२०७५ वैशाख ३० गते १८:०१
‘हिरो’ भन्ने वित्तिकै तपाईहाम्रा आँखा अगाडि चलचित्र या ठूलो पर्दामा बेजोड अभिनय देखाइरहेका व्यक्ति नाच्न थाल्छन् । तर हिरो त्यही हो, जसले आफ्नो श्रम, लगाब र मेहनतले सबैका अघि आफूलाई प्रमाणित गर्न सक्छ ।
‘मैले लामो बाटो तय गर्नुछ, त्यसैले म आफूलाई सरल र शान्त राख्न चाहन्छु, मैले यसलाई आफ्नो राष्ट्रलाई गौरवान्वित तुल्याउने एउटा अवसरको रुपमा मात्रै लिएको छु ।’
यस्तै सफलताको सिडी चढ्दै गरेका एक ‘हिरो’ हुन् क्रिकेटर सन्दिप लामिछाने, जो यतिबेला इन्डियन प्रिमियर लीग (आईपीएल) मा दिल्ली डेयर डेभिल्समा आबद्ध छन् । उनी एसासिएट राष्ट्रका सबैभन्दा बढी सम्भावना बोकेका बलरका रुपमा यतिबेला संसारभरी चर्चा बटुलिरहेका छन् ।
चर्चा मात्रै नभएर उनले आफू विश्वस्तरीय बलर भएको प्रमाणित नै गरेर देखाए । दिल्लीमा २० लाख भारतीय रुपैयाँमा आबद्ध भए पनि सुरुवाती ११ खेलमा स्थान नपाएका सन्दिपले शनिबार रोयल च्यालेन्जर्स बैंग्लोरविरुद्धको खेलमा बलरका रुपमा डेब्यु गर्ने अवसर पाए ।
नेपाली राष्ट्रिय टोली र यु–१९ टोलीका मुख्य सदस्य रहेका सन्दिप त्यस्तो खेलमा बलिङ गर्न आइपुगे, जहाँ विश्वस्तरीय ब्याट्सम्यान विराट कोहली, एबी डिभिलियर्स, मोइन अलीजस्ता क्रिकेटर थिए । दक्षिण अफ्रिकी क्रिकेटर एबी छक्का–चौका मास्टरका रुपमा चिनिन्छन् भने विराट महान् क्रिकेटर सचिन तेन्दुलकरका रेकर्डलाई तोड्न सक्ने क्रिकेटरका रुपमा उदाइरहेका छन् ।
यस्तोमा एसोसिएट टोलीबाट गएका र टेस्ट राष्ट्रका ब्याट्सम्यानको सामना नगरेका सन्दिप फिक्का साबित हुन सक्थे, तर उनले आफ्नो बलिङ कौशलले ति विश्वस्तरीय ब्याट्सम्यानलाई हायलकायल बनाए र खुलेर खेल्नै दिएनन् ।
बैंग्लोरविरुद्ध पहिलो ओभरदेखि नै बलिङ गर्न आएका सन्दिपले उत्कृष्ट बलिङ गर्दै ४ ओभरमा २५ रन दिएर १ विकेट लिए । पहिलो ओभरमा ६ रन दिएका उनले आफ्नो दोस्रो ओभरमा बैंग्लोरका ओपनर पार्थिभ पटेललाई एलबीडब्लु धरापमा पारेर पभेलियनको बाटो देखाए । जुन ओभरमा ५ रन दिएर १ विकेट लिए ।
उनको बलिङमा एबी डिभिलियर्सले एक छक्का प्रहार गरे भने विराट कोहली र पार्थिभ पटेलले १–१ चौका हान्नुबाहेक बाउन्ड्री हान्न दिएनन् । यो दिल्लीका नियमित बलरले गरेको भन्दा निकै उत्कृष्ट प्रदर्शन र किफायती बलिङ हो । सन्दिप आईपीएल खेल्ने पहिलो नेपाली खेलाडी समेत बनेका छन् ।
को हुन सन्दीप ?
दुई वर्षअघिसम्म खासै चर्चामा नरहेको सन्दिप गत संस्करणको यू–१९ विश्वकप क्रिकेटमा आयरल्याण्डविरुद्ध ह्याट्रिक गरेपछि एकाएक चम्किए । सो प्रतियोगितामा कुल १४ विकेट लिएका सन्दिप सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडीको दोस्रो नम्बरमा परेका थिए भने आईसीसीले सार्वजनिक गरेको विश्वकपका उत्कृष्ट खेलाडीको सूचीमा उनी अटाएका थिए ।
त्यसैबेलादेखि एशोसिएट टोलीबाट सम्भावना बोकेका खेलाडीको उदयका रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा उनको चर्चा मात्रै भएन उनलाई अष्ट्रेलियाका महान् क्रिकेटर सेन वार्नसँग तुलना पनि गरे । त्यसयता राष्ट्रिय टिमबाट खेल्दै आएका १७ वर्षीय लामिछाने यतिबेला आईपीएल खेलिरहेका छन् ।
‘नेपालमा होस् वा बाहिर, म केवल विगत केही वर्षमा आफूले गरेको कठिन मिहिनेतलाई स्मरण गर्छु । नाम र दामको पछाडि दौडिन्न ।’
उनको टिम आईपीएलको समूहचरणबाट नै बाहिरिएपनि उनले गरेको बलिङ निकै लोभलाग्दो थियो । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका तत्कालीन प्रशिक्षक पुबुदु दाशानायकेले १४ वर्षको उमेरमै चितवनबाट ‘टपक्क टिपेर’ काठमाडौं ल्याएदेखि नै उनले उमेर समूह र राष्ट्रिय टोलीबाट समेत उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दैै आफूलाई प्रमाणित गरिसकेका छन् ।
नवलपरासीमा स्कुल पढ्दापढ्दै प्रशिक्षक राजु खड्काको समन्वयमा नारायणगढको क्याम्पाचौरमा भएको ट्यालेन्ट हण्टबाट छानेर पुबुदुले सन्दीपलाई काठमाडौं ल्याएका थिए । बाबु भारतीय रेल्वेमा कार्यरत भएकाले भारतमै ब्याट र बल समाउन सिकेका सन्दिपले सन् २०१६ को सेप्टेम्बरमा अस्ट्रेलियाका पूर्वकप्तान माइकल क्लार्कको निमन्त्रणमा सिड्नीस्थित वेस्टर्न सबअर्व डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट क्लबबाट न्यु साउथ वेल्स प्रिमियर प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलेपछि आफूलाई झनै निखारे ।
त्यतिबेला सन्दिपलाई लिन माइकल क्लार्क आफैं विमानस्थल पुगेका थिए । सन् २०१७ मा यु–१९ विश्वकपको एसियाली छनौटमा २४ विकेट लिँदै प्रतियोगिताकै उत्कृष्ट खेलाडी र नेपालका लागि एकै प्रतियोगितामा सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडी बनेका थिए । गत वर्षको फेब्रुअरीमा चर्चित बेलायती क्रिकेट म्यागाजिन अलआउट क्रिकेटले विश्वकै उत्कृष्ट खेलाडीको सूचीमा सन्दिपलाई राखेको थियो ।
क्यारेबियन लीगमा सन्दिप
विश्वकै सबैभन्दा ठूलो व्यावसायिक क्रिकेट प्रतियोगिता आईपीएलमा अनुबन्ध भएका सन्दिपले अब क्यारिबियन प्रिमियर लीग समेत खेल्नेछन् । उनलाई क्यारिबियन क्षेत्रको लोकप्रिय क्रिकेट लिगका लागि उनलाई सेन्ट किट्स एण्ड नेभिस पेट्रिओट्सले ५ हजार डलरमा किनेको छ । जहाँ उनी अहिलेका विश्व क्रिकेटका हस्ती क्रिस गेलको टिमबाट खेल्नेछन् । लेग स्पिनर लामिछानेको ‘लेगब्रेक गुगली’ शैली उनको विशेषता मानिन्छ ।
सानो उमेरमा नै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा ख्याती कमाएका सन्दिप लामिछानेले धेरै फ्यानसहित नाम र दाम दुवै कमाइरहेका छन् । उनले आइपीएलमा छनोट भएपछि नेपाली टोलीबाट विश्वकप छनोट खेल्नका लागि जिम्बाबे गएको समयमा भनेका थिए, ‘नेपालमा होस् वा बाहिर, म केवल विगत केही वर्षमा आफूले गरेको कठिन मिहिनेतलाई स्मरण गर्छु । नाम र दामको पछाडि दौडिन्न ।’ नामिबियामा भएको वल्र्ड क्रिकेट लिग डिभिजन २ प्रतियोगितामा म्यान अफ द टुर्नामेन्ट भएका उनले सर्वाधिक १७ विकेट लिएका थिए ।
उनले आईसीसीलाई भनेको एउटा वाक्य यहाँ उल्लेखनीय छ, ‘मैले लामो बाटो तय गर्नुछ, त्यसैले म आफूलाई सरल र शान्त राख्न चाहन्छु, मैले यसलाई आफ्नो राष्ट्रलाई गौरवान्वित तुल्याउने एउटा अवसरको रुपमा मात्रै लिएको छु ।’ वास्तममा नै सो प्रतियोगितामा कप्तान पारस खड्का, सन्दिप लामिछानेलगायतका खेलाडीको कडा मेहनतका कारण नेपालले ‘वान डे’ राष्ट्रको मान्यता पाएको छ । नेपाल एसोसिएट राष्ट्रमा धेरै क्रिकेट फ्यान भएको मुलुक पनि हो । नेपाली क्रिकेटरको सफलतामा हरेक नेपालीको छाती ढक्क फुलेको छ । आईपीएलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेर सन्दिपले नेपालीलाई अर्को खुसियाली दिएका छन् । थप सफलताका लागि हाम्रो पनि शुभकामना !
यी युवतीको सुन्दरताले इन्टरनेटमा मच्चायो सनसनी